“Aaddee Adaanach Abeebee ministeera galii irraa maalif kaafamte? Iddoo kana eenyutu gaafachaa ture? Maalif gaafatan? – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Aaddee Adaanach Abeebee ministeera galii irraa maalif kaafamte? Iddoo kana eenyutu gaafachaa ture? Maalif gaafatan?
“Aaddee Adaanach Abeebee ministeera galii irraa maalif kaafamte? Iddoo kana eenyutu gaafachaa ture? Maalif gaafatan?
Balaayinah Kindee fi abbotiin qabeenyaa Amaaraa hundi maalif ishiin mormaa turan? (Balaayina Kindee kuni armaan dura Biraanu Xagaayee ajjeessuuf yaalu isaa ni yaadatama). Hojjettootni achi keessa jiran %75 ol Amaara ta’e osoo jiru Oromoon baay’ate jechuun mormii kaasaa turan. Maal baratani maal dhaban? Ishiin dura waajjira kana yeroo dheeraaf Amaaratu nama (Malaaku Faantaa) jedhamutu hogganaa ture. Finfinnee keessa gamoo fi hoteelli gurguddaan bara wayyaane ijaarame keessaa % 60/70 ol kan saba Amaaraati. Liqiin baankii haqamaa ture hedduu kan fudhate warra kana hin turree?
Ishii achii kaasuun daldaltoota maraaf mirga walqixxummaan fayyadamu ni fidaa? Eenyuuf yaadameeti? MM gaaffi jaraa deebisuuf halkani guyyaa hojjachaa akka jiru kuni ragaadha. Jarri kuni abbaa fedhan ni ajjeessisu, ni hisiisuu (daldalaa sogidaa muslima Walloo hisiisani warshaa fi qabeenya isaan soogidda Afaar jiru saama jiran yaadadhaa), aangoo irraa ni kaasisu, ni muudu, waan fedhan raawwatu, saba walitti buusuu, masgida gubsisuu, midiyaa Oromoo fi saba biraa arrabsan ijaarani deeggaru, kkf. Waan fedhan ifatti raawwatani namni isaan gaafatu hin jiru. Egaa bitti kuni harka lafa jalaan eenyutu bulchaa jira.
A/ Adaanach akka waan hojii guddaaf barbaadamte fakkeessuun holoola ofuun maaliif laata? Bu’aa buusaa jirti taanan bakkuma waan gaarii itti hojjachaa jirtu kanatti ji’a shan/jahaa hafee eeguun maalif dadhabame? Dhimmoota namoota ka’aniif mudama haaraa kennameen walqabate wanti urgaa’u hedduudhaa.Yaa xiinxalamu!
Dhugaan ilmoo Rabbiiti.
Auzubillah Yeshaxan Rajjim
Uummatnii yeroo muudamnii wayii dhufu hundaa, ABIY maaliif ebaluun filee maaliif ebaluun aangoo irraa kaasee, jechuun AJANDAA godhamee lallabamu kuni deeggartoota BILTSIGINNAA ta’aniitii moo, BILTSIGINNAA sirreessuuf lallabuu????
Paartii FILMAATAAFis ta’ee QABSOO Gama hundaatiin taasiisuuf ijaarranne qabna. Ajandaa isaanii dhiisnee keenya yoo jabeeffanne furmaata, nuuf ta’uu danda’a.
BILTSIGINNAAN YOO DANDEEYTI BOOYYEELLEE FILACHUU DANDA’A…
Paarlaamaa Itoophiyaa: Miseensonni paarlaamaa muudama Diyaaqon Daani’el Kibrat morman